Mety hampidi-doza ny indostrian'ny fizahantany ny tolo-kevitra hihaza Botswanaana
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Mety hampidi-doza ny indostrian'ny fizahantany ny tolo-kevitra hihaza Botswanaana
Ny tolo-kevitr'i Botswana hanafoanana ny fandraràna ny fihazana sy fampidirana gull elefanta dia niteraka fihetsika ara-politika, fandavana, fampahalalana diso ary fanararaotana avy amin'ireo vondrona mpihaza sy manafoana. Fa inona no ambaran'ny vondrona izay manana fatiantoka be indrindra, ny indostrian'ny fizahantany sary momba an'io?
Ny fandrarana fihazana
Ny famoahana ny tatitra dia natao ara-potoana satria ny fifidianana tany Botswana dia nitazona adihevitra mafana tao amin'ny haino aman-jery. Ny tolo-kevitra dia ny hampiroborobo ny indostrian'ny fihazana safari, ny fananganana fefy bibidia, ny lalana akaiky ny fifindra-monina biby, ny fampidirana ny elefanta ary ny fananganana toeram-pitrandrahana hena elefanta.
Ny fandraràna dia namela vondrom-piarahamonina sasany, izay miankina amin'ny fihazana tsy fananana fidiram-bola, ka nahatonga ny tsy fahafaham-po. Ny tolo-kevitra dia taorian'ny fivoriana niaraka tamin'ny mpiray antoka isan-karazany ao anatin'izany ireo vondrom-piarahamonina voakasik'izany, na izany aza dia tsy natolotra afa-tsy fifampidinihana kely fotsiny tamin'ny indostrian'ny fizahantany na vondrom-piarahamonina misitraka ny fizahantany.
Androany 18% amin'ny tanin'ny firenena dia natokana ho an'ny valan-javaboary ary 23% ho an'ny faritra fitantanana bibidia. "Botswana dia namorona laza mampitsiriritra foana nandritra ny taona maro lasa toerana fizahan-tany lehibe," hoy i Beks Ndlovu avy ao amin'ny Afrikana Bush Camps, "Ireo politika ireo (tsy nisoroka lalana) dia namorona toerana safariana ikambana sy indostria izay faharoa lehibe indrindra ao Botswana, asa sy fanambinana ho an'ny olom-pirenen'i Botswana maro. ”
Tamin'ny 2017, ny fitsangantsanganana sy ny fizahantany dia nandray anjara tamin'ny 11.5% amin'ny harin-karena faobe ao amin'ny firenena, ary manohana ny 7.6% amin'ny totalin'ny asa ataon'i Botswana (asa manodidina ny 76,000) miaraka amin'ireo isa roa ireo. Noho izany dia olona marobe no manana fiantohana te hiaro ny bibidia ao amin'ny firenena.
“Saika amin'ny fepetra rehetra; fahafaha-miasa, fivelarana fahaiza-manao, fidiram-bola azo, isan'ny mpitsidika, tombony mandondona amin'ny toekarena midadasika ary koa fiheverana ny tontolo iainana ohatra, ny fizahan-tany fizahan-tany tsara tantana no safidy tsara indrindra amin'ny fampiasana tany amin'ny fitantanana ireo faritra arovana any Botswana, ” hoy i Ian Michler, Talen'ny Invent Africa Safaris.
Tandindomin-doza io indostrialy mpamokatra be io ankehitriny satria mpitsidika maro no misafidy an'i Botswana ho toerana safariany manokana noho ny fijoroany miady amin'ny fihazana. Ny sasany amin'ireo mpanjifa sy ampahan'ny haino aman-jery dia efa miantso fanaovana ankivy ny fitsangatsanganana any Botswana.
Valin'ny indostrian'ny fizahan-tany
Mijanona ho tsara hatrany ny indostrian'ny fizahan-tany sary fa ho re ny feon'izy ireo: "& Beyond dia matoky fa i Botswana dia toeram-piarovana azo antoka ho an'ny bibidia," hoy i Valeri Mouton avy ao & Beyond.
Fomba fijery iray izay navoakan'i Colin Bell, mpiara-manorina ny orinasa safari fizahan-tany, Natural Selection: "Ny fahitako azy dia tsy ilaina ny manatona ireo pilina tosidra amin'izao dingana voalohany izao eo am-panaovana ny fizahana. izany fahatsapana tsara izany no hanjaka amin'ny farany. ”
Wilderness Safaris, mpandraharaha ara-tontolo iainana malaza any Botsoana, dia nanambara fa hiara-hiasa amin'ny Minisitra izy ireo amin'ny famahana olana iray, ary ny tanjon'izy ireo dia ny fampitomboana ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny sehatry ny fizahantany ary hampitomboana ny fandraisany anjara amin'ny toekarem-pirenena.
Manaiky i Ndlovu fa: "Ny tolo-kevitr'ireo mpikamban'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra no tolo-kevitra naroson'ny filoha ankehitriny. Ny indostrian'ny fizahantany dia manaraka ny fizahana ary tsy isalasalana fa ho re tanteraka ny fomba fijerintsika.
Dereck Joubert, CEO an'ny Great Plains Conservation dia feo iray tsy matoky tena. Miantso ilay tolo-kevitra hoe, 'Lalànan'ny ra any Botsoana', Joubert dia nanomboka fanangonan-tsonia hanohitra ireo tolo-kevitra ireo. “Elefanta maty efa hitako tamin'ny olon-dratsy. Tsy mila mahita vongana arivo intsony aho avy amin'ny governemantantsika, ”hoy i Joubert.
Izay zakan'izy ireo ho very
Na dia maro aza no nidera ny governemanta noho ny fanekeny ny fizotran'ny consultative, tsy fahampiana tamin'ny taona lasa, ny hafa kosa milaza fa mifanohitra amin'izay rehetra ijoroan'ny firenena izany. Fantatra ho fialofana azo antoka ho an'ny elefanta izy ireo, ary fonenan'ny efa ho ny ampahatelon'ny elefanta any Afrika, dia mahatsapa izy ireo fa manana andraikitra hiaro ireo zavaboary ireo ny firenena.
"Ny fampodiana ny fihazana amboara dia tsy hampitsahatra ny fihazana, na koa fampidirana ara-dalàna ny vokatra ivoara sy elefanta hafa, izay manidina manoloana ny fanoloran-tenan'i Botswana amin'ny maha mpikambana mpanorina ny Elefant Protection Initiative," hoy ny maso ivoho misahana ny tontolo iainana.
Manaiky i Howard Jones, Tale jeneralin'ny Born Free, ary nilaza fa io no tsy izy indrindra amin'ny fomba fanatonana ny fiaraha-miaina ary "nanapa-kevitra ny governemanta Botswana fa ny biraon'ny tombom-barotra manokana dia mety mihoatra ny fahaiza-misaina."
Fanambarana izay navoakan'ny fanangonan-tsonia nataon'i Joubert, "Ny fihazana, ary ny culls natolotra dia tsy natao hiarovana ny tontolo iainana mihitsy, fa hanome fahafaham-po ny fitiavam-bola fotsiny."
Nofintinin'i Michler izany: "Ny governemanta ankehitriny dia marina amin'ny faniriany hanatsara ny vondrom-piarahamonina, ny adin'olombelona ary ny fanamby amin'ny fifandraisana tsy raharahan'ny governemanta teo aloha, fa ny fandraisana fepetra mihemotra fa tsy ny fananganana rakitsoratra ecotourism tsara dia tsy fahendrena . "
Feo 55 ho an'i Afrika: nanambara fifaninanana fanoratana ny VisaFreeAfrica
WTTC: miroborobo ny sehatry ny fizahantany afrikanina